2019 NEW FXDR™ 114. | Harley-Davidson® of Mandalay, Myanmar
‹ Home › Latest news › 2019 NEW FXDR™ 114.
Coming Soon! Legend In The Golden Land.
Harley-Davidson Motor Company မှ အစစ်အမှန်ဖြစ်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေဟာ၊ စစ်မှန်တဲ့ Harley-Davidson Motorcycle အသစ်တစ်ခုကို H-D Softail Family ထဲမှာ တွေ့ဆုံဖို့ မွေးဖွားပေးခဲ့ပါပြီ။
Harley-Davidson Softail Family ရဲ့ တင်ဆက်လာတဲ့ ရဲရင့်ခြင်း၊ ဖျတ်လတ်ခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းစွဲဆောင်ခြင်းများနှင့်အတူ ဝိဉာဉ်အသစ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို တွေ့ကြရတော့မှာပါ။
မာကျောတောင့်တင်းတဲ့ဖရိန်ပေါ်မှာ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ညင်ညင်သာသာနဲ့ခံစားနိုင်စေဖို့၊ အပြည့်အဝတန်ပြန်မျှတတဲ့ Milwaukee Eight 114 cu.in အင်ဂျင်နဲ့ မဆုပ်မနစ်၊ မရပ်မနား ခွန်အားကိုဖြစ်ပေါ်ရရှိစေဖို့ရာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။
Harley-Davidson Softail Family ရဲ့ မော်ဒယ် အမျိုးအစားအများကြီးထဲမှာမှ ထူးခြားကွဲပြားခြားနားတဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့သလို၊အလင်းတစ်ခုအလား လျင်မြန်မှုတွေအတွက် အမြင့်ဆုံး ဖျတ်လတ်ပြင်းထန်ခြင်း၊ အများဆုံး တုံ့ပြန်သွက်လက်ခြင်းများနဲ့အတူ Harley-Davidson သမိုင်းအတွက် တိကျသေသပ်တဲ့ Muscular Power Cruisers ဖြစ်စေခဲ့ဖို့ အသေအချာ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
မကြာမှီအချိန်အတွင်း ရွှေနိုင်ငံရဲ့ လမ်းမများထက်မှာ Rider တွေအသုံးတော်ခံနိုင်ဖို့ Harley-Davidson Of Mandalay, Myanmar Dealership ဆီသို့ရောက်ရှိလာတော့မှာပါဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။